Saturday .4April . 2020
သင်္ဘောပေါ်ကနေ ရေထဲကို ပြုတ်ကျသွားတဲ့ အမျိုးသမီးကို မိမိအသက်ကိုမငဲ့ဘဲ ကူညီခဲ့သူများကို ချီးကျူးနေ
တကယ့်သူရဲကောင်းတွေ အပြင်လောကမှာ အများကြီးရှိပါတယ်…ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ သူတို့လို လူမျိုးတွေကို စူပါဟီးရိုးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်…မြန်မာပြည်မှာလဲ အဲဒီလို စူပါဟီးရိုးအကြောင်း လူပြောများနေပါတယ်…အဲတာကတော့ ယမန်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက သဘောၤတစ်စီးဟာ ဒလမြို့ဘက်ခြမ်း ဆိပ်ကမ်းကနေ ထွက်ခွာလာစဉ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေထဲသို့ပြုတ်ကျခဲ့ရာမှာ ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ ရေယာဉ်မှူးနဲ့ အဖွဲ့အကြောင်းကို လူပြောများနေတာပါ…..
ထွက်ခွာစ သင်္ဘောပေါ်ကနေ ရေထဲကို အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပြုတ်ကျသွားချိန်မှာ အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ဦးက အရင်လိုက်ဆင်းသွားပြီးနောက် သင်္ဘောသားတစ်ဦးလည်း ရေထဲသို့လိုက်ဆင်းကာ ကူညီကယ်ဆယ်ခဲ့တာပါ…….
ဒါ့အပြင် ကမ်းပေါ်မှာ ရှိနေသူတွေကလည်း ဆွဲတင်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်….ဒီလို ရေထဲကို ချက်ချင်းလိုက်ဆင်းပြီး ကယ်ခဲ့သူကတော့ အဆိုပါ ချယ်ရီ- ၁ သင်္ဘောရဲ့ ရေယာဉ်မှူးဖြစ်တဲ့ ဦးမြင့်အေးဖြစ်ပါတယ်…..
ရေထဲကို ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးက အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ဒေသခံဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…… ထွက်ခါစသင်္ဘောနှင့် ဘော အကြား ရေထဲမှာ နစ်မြှပ် လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေချိန်မှာ သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်က ရေယာဉ်မှူး ဦးမြင့်အေးက သူ့ရဲ့ ဖိနပ်ကိုတောင် မချွတ်တော့ဘဲ ရေထဲကို လိုက်ဆင်းပြီး ကယ်ခဲ့တာပါ….
ဒါကြောင့် ဒီလို သတ္တိရှိရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး သူတစ်ပါးအသက်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့ ရေယာဉ်မှူးကြီး ဦးမြင့်အေးနဲ့ အဖွဲ့ကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ချီးကျူးနေကြတာပါ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သူတို့အတွက် ချီးကျူးစကားလေးတွေ ဆိုခဲ့ကြပါအုံးနော်…
Writer ; Lucky
We Love တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး Covid-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် လှူဒါန်းမယ့် အေးမြဖြူ
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ မမသင်ဇာ
လက်ဆေးဖို့ အိမ်ထဲမှာနေဖို့အပြင် အိမ်လာလည်တဲ့သူတွေကိုလည်း အားမနာသင့်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း
ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဂေဟာမှာ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ